IPHONE ပေါ်မှာချိတ်ဆက်ကာရယူခြင်းပျောက်ကွယ်သွား - IOS အတွက် - 2019
ချိတ်တွဲ - သင်သည်အခြား devices များနှင့်အတူမိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုမျှဝေခွင့်ပြုကြောင်းအထူး iPhone ကိုအင်္ဂါရပ်။ ကံမကောင်းစွာအသုံးပြုသူများမကြာခဏမီနူးကို item ၏ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးများ၏ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတွေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမှာကြည့်ရှုမည်အောက်တွင်။
အဘယ်အရာကို iPhone ကိုချိတ်တွဲကိုဆုံးရှုံးလျှင်လုပ်ဖို့
ကူညီနိုင်ရန်အတွက်သင် iPhone ပေါ်မှာအင်တာနက်ကိုဖြန့်ဖြူး function ကိုသင့်မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ၏သင့်လျော်သော setting များကိုရန်လုပ်ရပါမည်ကိုသက်ဝင်။ သူတို့ပျောက်ဆုံးလျက်, modem mode ကိုသက်ဝင်စေမယ့် button ကိုနေတယ်ဆိုရင်, အသီးသီးပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်: သင်, ကွန်ယက်အော်ပရေတာသည်နှင့်အညီလိုအပ်သောအပြင်အဆင်များစေရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဖွင့်ပါက Settings ။ ပြီးနောက်ကိုသွား "ဆယ်လူလာ".
ထို့နောက်ကို select "ဆယ်လူလာဒေတာများကွန်ယက်".
ယူနစ် Locate "ချိတ်တွဲ" (စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး) ။ ဒီမှာသည်နှင့်သင်အော်ပရေတာသင်အသုံးပြုဘယ်လိုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်ဟုလိုအပ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရန်လိုအပ်သည်။
"APN ကို": အစာရင်းပြုစု "Internet.beeline.ru" (ထိုကိုးကားမရှိရင်);
ရေတွက် "User Name ကို" နှင့် "Password ကို": တစ်ဦးချင်းစီစာရင်းများတွင် "Gdata" (ထိုကိုးကားမရှိရင်) ။
"APN ကို": အင်တာနက်ကို;
ရေတွက် "User Name ကို" နှင့် "Password ကို": Gdata ။
"APN ကို": Internet.yota;
ရေတွက် "User Name ကို" နှင့် "Password ကို"ဖြည့်စွက်ရန်မလိုအပ်။
"APN ကို": Internet.tele2.ru;
"APN ကို": Internet.mts.ru;
ရေတွက် "User Name ကို" နှင့် "Password ကို": MTS ။
ကျန်ရှိသောမိုဘိုငျးအော်ပရေတာများအတွက်ရွေးချယ်စရာ၏နောက်ထား (အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်အွန်လိုင်း get သို့မဟုတ်ဖုန်း service provider ကပေါ်နိုင်သည်) fit လေ့:
ဤအတန်ဖိုးများထဲသို့ဝင်သောအခါ, ခလုတ်ကို၏အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိ tapnite "နောက်သို့" နှင့်အဓိက settings ကိုပြတင်းပေါက်ပြန်သွားပါ။ ပစ္စည်းများ၏ရရှိနိုင်မှု Check "ချိတ်တွဲ".
ဒီ option ကိုမရရှိနိုင်ပါသေးမပါလျှင်, သင့် iPhone ကို Restart လုပ်စမ်းပါ။ setting များကိုမှန်ကန်စွာထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြလျှင်, restart လုပ်ပါပစ္စည်း menu ကပေါ်လာသငျ့သညျ။
Read more: သင့်ရဲ့ iPhone ကို restart ပြန်လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
သင်သည်မည်သည့်အခက်အခဲများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုစွန့်ခွာရန်သေချာစေပါ - ငါတို့သည်သင်တို့ပြဿနာကိုနားလည်ကူညီပေးပါမည်။